बाजुरामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार
लगातारको वर्षाले सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साँफे–मार्तडी सडक खण्ड दुई महिनादेखि अवरुद्ध भएपछि बाजुरामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको छ ।
अख्तियारमा एक वर्षमा गोरखाबाट २६ उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गोरखाबाट गत आवमा २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा जिल्लाका विभिन्न कार्यालयसँग सम्बन्धित २६ वटा उजुरी परेका हुन् । त्यसमध्ये १९ वटा उजुरी फस्र्योट भएको छ ।
सोलुका ३४ वडा सचिवविहीन
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका अधिकांश वडा सचिवविहीन भएका छन् । ८ स्थानीय तह र ५२ वडा रहेको सोलुखुम्बुमा अहिले धेरै वडा सचिवविहीन छन् । ५२ वडामध्ये ३४ वडा, वडा सचिवविहीन छन् । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाको २ नम्बर वडा र ९ नम्बर वडामा सचिव नभएको मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पाले बताए ।
प्रहरी नै उम्काउँछन् तस्कर , एक हजार दिएपछि बालुवा ‘पास’ !
नदीबाट अवैध रूपमा झिकिएको बालुवा लैजान प्रहरीको एजेन्टलाई प्रतिट्रिपर एक हजार दिएपछि तस्करी उम्कने गरेको पाइएको छ । रातको समयमा इन्द्रावती नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी निकालिएको बालुवा पास गराउन ट्रिपर चालकले रकम दिएपछि प्रहरीले पक्राउ नगर्ने गरेको पाइएको हो ।
अछाममा राहदानी लिने घटे
अछाममा राहदानी लिनेहरुको संख्या घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा राहदानी लिनेहरुको संख्या घट्दै गइरहेको पाइएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले असल मित्र तथा नजीकका छिमेकीे नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई औंपचारिक राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्र नभई जनस्तरको सम्बन्धका आधारमा पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
निजामती कर्मचारीले पनि असहयोग गरे : मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले सहयोग नगरेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले समेत सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
निर्देशन नमान्ने ठेकेदारलाई कारबाही : गृहमन्त्री
रोकिएका विकास निर्माणका काम अझै सुरु नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । विकास निर्माणमा आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि सरकारले एकीकृत रूपमा अघि बढने निर्णय गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताए ।
सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक
गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका बुंकोटकी लीलामाया श्रेष्ठको दैनिकी खेती किसानीमै बित्छ । वर्षौंदेखि खेतबारीमा पसिना भिजाएकी उनको जग्गामा स्वामित्व थिएन । तर ४ वर्षअघि उनी त्यही खेतबारीको मालिक पनि बनिन् । श्रीमान् शुक्रराज र उनको नाममा संयुक्त लालपुर्जा भएपछि उनी १५ रोपनी जग्गाको मालिक भएकी हुन् ।
अधिकांश सवारीको यान्त्रिक अवस्था कमजोर
यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको यान्त्रिक अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ । चितवन अटो मेकानिकल व्यवसायी संघको २२ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर भरतपुर–१ रामनगरमा शनिबार सवारीको यान्त्रिक परीक्षण र चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि निजामती कर्मचारीले अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गर्ने ठाउँ रहेकाले त्यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
विकासे काम गर्न श्रम सहकारी
रुकुम पश्चिममा उपभोक्ता समितिले गर्ने विकास निर्माणका काम अब श्रम सहकारी संघबाट हुने भएका छन् । विकासे काम प्रभावकारी र बजेट फ्रिज हुन नदिन श्रम सहकारीबाट विकास निर्माण गर्न लागिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको केही समयअघि बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहमा श्रम सहकारी संघ गठन गर्न निर्देशन गरेको छ ।
चुनावी वाचा कहिले पूरा हुन्छ ?
वि.सं २०७४ असोज २ गते सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा १९ हजार ३९३ मत प्राप्त गरी विजय भएको एक वर्षपछि महानगरवासीले मेयर विजयकुमार सरावगीको प्रतिबद्धताको खोजी गर्न थालेका छन् ।
नमुना सहरको क्षतिग्रस्त सडक
नयाँ सहर र नमुना सहरको रूपमा विकास भएको फिदिमको सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । सडकका पीच उप्किएको छ । सहायक सडकको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएका छन् ।